Ahina ho namoy fo noho ny valanaretina: namono tena ilay dokotera nararin’ny coronavirus | NewsMada
Vaovao nanaitra ny maro ny tranga niseho tao amin’ireo hopitaly ao Toamasina, ny faran’ny herinandro teo. Anisan’izany ny fahafatesan’ny mpitsabo iray voan’ny Covid 19, izay voalaza fa maty namono tena tao amin’ny CHU Morafeno…
Voatery tsy maintsy naiditra hopitaly tetsy amin’nyCHU Morafeno rehefa nahitana soritr’ aretina coronavirus, ary nahina mafy, ny asabotsy teo ny dokotera iray, 53 taona. Akory anefa ny hagagan’ny mpitsabo rehetra fa efa mifatotra tenda ary tsy nisy aina intsony ity dokotera ity rehefa nozahana. « Namatotra ny tendany sy ny orony tamin’ny lambam-pandriana ary nohenjanina tamin’ny fandriana izy », hoy ny mpitsabo raha nanontaniana.
Nialoha izany, nisy rangahy iray 60 taona iray nifanila efitra taminy. Nalaina fiara avy tao amin’ny fokontanin’ Antsiranampasika izy io ary nentina tao amin’ny hopitalibe Analankininina ka nampidirina efitra fameloman’aina avy hatrany satria efa tena sempotra. Nafindra tao amin’ny hopitaly CHU Morafeno avy eo natao ny fombafomba rehetra toy ny fametrahana fahazoan-drivotra “oxygène“. Tsy tana anefa ny ain’ ity raim-pianakaviana. Niverina tao amin’ilay dokotera namany narary ireo mpitsabo rehefa avy nikarakara io rangahy io, saingy namantana faty (namato-tena) izy ireo. Mbola baraingo ny anton’izany rehetra izany. Tombanan’ny sasany fa anisan’izany ny tsy fahazakany ilay nifanila efitra taminy namoy ny ainy.
Efa mijery toerana hafa andraisana marary
Ankoatra izany, anisan’ny faty nivoaka ny hopitaly ao Toamasina ilay renim-pianakaviana mpandraharahan’ny fonja, efa nisotro ronono maty teo amin’ny faha 66 taony. Tsy nisy azon’ny fianakaviana niandrasana faty na noentina tao an-tokantranony. Nalevina avy hatrany noho ny fanahiana amin’ny fiparitahan’ny Covid-19.
Etsy an-daniny, efa manomana toerana handraisana marary ny ao Toamasina, amin’izao fotoana izao noho ny fahafenoan’ny hopitaly sy ny « Foyer social Canada » any an-toerana. Efa karakaraina koa, amin’izao fotoana izao, ny kianja mitafon’ny CRJS sy ny « Maison de rétraite » etsy Tanamakoa.
Eo anivon’ny CCO ihany ny vaovao ofisialy
Tsiahivina fa anisan’ny nivoitra tamin’ny nambaran’ny mpitondra tenin’ny CCO, ny Pr Vololontiana Hanta, omaly ny fanitsiana ireo vaovao miely etsy sy eroa. « Tsy hoe matin’ny coronavirus avokoa na mitondra ny soritr’aretina aza. Matetika manana aretina efatra ny olona iray… Efa ny tranga nahina mafy, saingy sitrana soa aman-tsara… Havoakanay eto ihany ny vaovao ofisialy raha misy tranga miseho », hoy izy.